Gaafiin uummata Oromoo mana hidhaa Maaikalaawii diiguun hin deebi’u – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGaafiin uummata Oromoo mana hidhaa Maaikalaawii diiguun hin deebi’u
One of the two (Kaliti and Maaikalaawii ) of the most notorious and well – publicized prisons in Ethiopia is Maaikalaawii located at the heart of the city just a stone throw away from the Chinese government donated African Union (AU) building and all other offices of regional and international agencies.
Gaafiilee uummatni Oromoo gaafachaa jiran keessaa inni tokko hidhamtootni siyaasaa akka gadi lakkifaman ta’ullee, shirri Wayyaaneen uummata gowwoomsuuf xaxaa jirtu akka jijjiirama siyaasaatti laalamuu hin qabu. Impaayarri Itoophiyaa tun matumti ishiituu mana hidhaa sabootaa waan taateef, mannii hidhaa guddaan kun diigamee; sirni walqixxummaa sabootaa, sab-lammootaa fi uummattootaa mirkaneessu hanga hin uumamnetti manoota hidhaa diiguudhaan jijjiiramni bu’uraa dhufuu hin danda’au. Mana hidhaa Maaikalaawii diignee muuziyeemiitti jijjiira jechuun Wayyaanotaa: tokkoffaa, faranjoota fi mootummoota warra dhihaa akkasumas haawaasota Addunyaa gowwoomsuuf; lammaffaa, shira kana keessa yeroo bitachuuf, mala biraa barbaaduuf umurii bittaa isaanii hanga danda’ame dheeresuufi.
Maaikalaawiin mana hidhaa namootni keessatti dararaman keessaa isa hangafa ta’ullee, manneen hidhaa biroo baay’eetu jiru. Bakkeen namootni keessumaayyuu ilmaan Oromoo keessatti dararamaa jiran Oromiyaa keessa hedduutu jiru. Isaan kun maaliif hin diigamne? Hidhamtootni siyaasaa gadi lakkifamu yoo jedhan kan Maaikalaawiitti hidhaman qofaa dhaa? Kan mooraa waraanaatti hidhaman, kan manaoota barumsaa keessattillee hidhamanii jiran, kan bakka buuteen isaanii hin beekamne hunduu sababa siyaasaatiin waan ta’eef, hanga lubbuun jiranitti hunduu bilisa bahuu qabu. Hidhamttotni siyaasaa ni hiikamu yoo jedame, asirratti haaldureen jiraachuu hin qabu. Haa ta’u malee, oduma kuni hundumtuu ta’uu danda’ee, gaafiin uummattootaa isa kanaan deebii argachuu hin danda’u. Gaafiileen uummattootaa keessumaayuu kan Oromoo isa kana qofaa miti.
Gara dhimma matadureetti deebi’uudhaaf, gaafiin uummata Oromoos ta’ee kan uummattoota biroo mana hidhaa Maaikalaawii diiguun hin deebi’u. Sirna Wayyaanee kana keessatti jijjiiramni kamiiyyuu yoo godhame, bu’aa isaaniitiif yoo ta’e malee, jijjiiramni dhugaa kan uummattootni barbaadan waan hin milkoofneef, kanarratti yeroo, qabeenya, beekumsa fi dandeettii balleessuun hiika hin qabu. Sirni kun hundeedhaa buqqa’uu qaba. Sirni Wayyaanee baduu qaba. Hamma sirni kun jirutti jijjiiramni kamiiyyuu yoo yaalame, bu’aa hin fidu. Yoo dhugumatti biyyattii sana keessatti jijjiirama bu’uraa tokko fiduuf kan hojjetamu ta’e, xinnaatee yoo xinnaate tarkaanfiileen armaan gadii kun hojiin mul’achuu qabu: